Sababa Covid-19 namni hospitaala galu Iowa keessati guyyaan akkuma dabalaa deemu jira
Published October 14, 2020 at 10:31 PM CDT
Sababa Covid-19 namni hospitaala galu Iowa keessati guyyaan akkuma dabalaa deemu jira.
Akka biyyati guututi namni hospitaala galee jiru 473 dha, namni 63 kan hospitaala Sioux City keessa jiru dabalatee.
President fi CEO kan UnityOint fayyaa akka jedhetti torbaan lammaa isaati dhukkubsattota baaye akka jiru dubate, akka mana barumsaa baname irraa. Dhukubichi doktoraataf, narsiidhanii fi hojattoota achi keessatif baaye ulfaate jedhan, garuu August qixxee keesa namni lama qofa yaalun iraftii xiqqo argatanii turan.
Yeroo qufaa dhufu kana irrati sodaachisa kan jiru yoo tau namni haguugi fuula godhatani akka fudhatan himan.
Official Nebraska akka jedheti ayyaani halawiina kun nama corona virus qabame akka hospitaala baayatu nitaasisa jiran. Gov. Pete Ricketts akka jetteti ijoolen ammas trick-or-treating akka deemu danda’an himan garuu ummani ufiii isaaniti kennuu irra akka karameela barrii ufiirra kaahanif himan. Ricketts, waan taeef seera corona virus baaye kan dhoogef, halawiinaf ammo seera haarawa nibaasa jedhame hin yaadamu, garuu seera ogeeyyin fayyaa jedhan kan aada trick-or-treating akka jala deemamu hime.
Balaliin yeroo jalqabaa Denver irraa gara Sioux City deemu waggaa baaye booda guyyaa haar’aa Sioux Gateway Airports seaati booda buee jira. Barariin United Airlines kan SkyWest akka lafa gahu naanawa 4:30 akka karoorse ture himan. Eebba mana har’a ajajtoota magaala wajiin har’a godhamee ture. Asiin dura sagantaan kun xiyyaara kun qophaahe Sioux City irraaa wayta birraa 2014kan keessa.
Auditor Woodbury County fi commisionar filannoo Pat Gill akka himetti website filannoon haarawa kana https://elections:woodburycountyiowa.gov dha.
Gill akka jedhetti website kun informetiona filannoo akka argatan, filannoof akka galmaahan, fi haala filannoon itti deemu beekuf baaye nama qarqaara jedhan. Website Woodbury County irratis kan argamu ta’u mala.
Local NewsLocalIowaNebraskaSouth DakotanewsCOVID-19Oromo
Iowa keessati, dhukubsattoota 449 mana fayyaa Sioux land keessati namni 72 hospitaala Sioux City
Iowa keessati, dhukubsattoota 449 mana fayyaa Sioux land keessati namni 72 hospitaala Sioux City lama keessati yaali argachu jirani. September jidduu…
Manni fayyaa Sioux land akka gabaasetti sababa Covid-19 namni lama Woodbury County keessati akka due
Manni fayyaa Sioux land akka gabaasetti sababa Covid-19 namni lama Woodbury County keessati akka due gabaasan waliigalatti namni due 78.Guyyaa har’a namni…
Sababa Covid-19 namni 3 dabalataan Woodbury County keessati du’uu gabaasan
Sababa Covid-19 namni 3 dabalataan Woodbury County keessati du’uu gabaasan. Manni fayyaa Sioux land akka gabaaseti namootin duan kunis nama umrii 61-80…
Seaati 24 keessati Jiraattoni Iowa sababa Covid-19 namni 17 du’uu gabaasan
Seaati 24 keessati Jiraattoni Iowa sababa Covid-19 namni 17 du’uu gabaasan.waliigalatti virus Kanaan kan qabame ammo nama 600 dha.Hanga dhukubni kun…